ဦးဉာဏိဿရ ပြောတဲ့ ဧည့်သည် မြန်မာတို့ ဗဟိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ၀င်ရောက်နေထိုင်ခြင်း | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« All the Muslims and Islamic organizations in Myanmar need to demand U Thein Sein to arrest U Wira Thu together with all his gang members and investigate the 969 movement
မငိုပါနဲ့ မိတ္ထီလာ »
ဆရာတော်ပြောသွားတဲ့ ဧည့်သည်တွေအကြောင်း နည်းနည်း ပြောကြည့်မယ်။ ၈-ရာစု၊ ၉-ရာစု လောက်က သမိုင်းကြောင်း တချို့ကို မပြောသေးဘူး။ လောလောဆယ် ကျနော့်ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ စာအုပ် တစ်အုပ်က စာမျက်နှာကိုပဲ အရင်ကြည့်ဦးမယ်။ ဒီစာမျက်နှာက ဒေါက်တာသန်းထွန်းရေးတဲ့ `မြန်မာ့သမိုင်း မြေပုံများ´ ဆိုတဲ့ စာအုပ်ရဲ့ ပထမဆုံး စာမျက်နှာပါ။ (၁၇) ရာစုဆိုတာ ၁၆၀၀ ကျော်နှစ်များကို ဆိုလိုတယ်လို့ လူတိုင်းသိကြမယ်ထင်တယ်။ အင်္ဂလိပ်ဝင်လာတာ (၁၉) ရာစု .. ။ဦးဉာဏိဿရ ပြောတဲ့ ဧည့်သည်
.. “တို့မြန်မာနိုင်ငံကို ဗုဒ္ဓဘာသာ ရောက်တာနှစ်၂၀၀၀ရှိပြီ။ ခရစ်ယာန်တွေ၊ အစ္စလာမ်တွေ ရောက်လာတာက အင်္ဂလိပ်ဝင်မှ ရောက်လာတာ။ အဲဒီနောက်မှ ရောက်လာတာ ဆိုတော့ နှစ်တစ်ထောင်မပြောနဲ့ တစ်ရာ တစ်ရာ့ငါးဆယ်လောက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ ဒါကို ပြောရမယ်ဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာက အိမ်ရှင်နိုင်ငံပါ။ အဲဒီလို Invade လုပ်ပြီးတော့ ဝင်ရောက်လာကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ Migrate လုပ်ပြီးတော့ ဝင်ရောက် လာကြတဲ့ လူတွေက ဧည့်သည်တွေ။” …..
ထွန်းစေဖို့ ဆိုတဲ့ စာအုပ် စာမျက်နှာ ၆၅ မှာ “အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ဖေါ်ပြထား
“တို့မြန်မာနိုင်ငံကို ဗုဒ္ဓဘာသာ ရောက်တာနှစ်၂၀၀၀ရှိပြီ။…” လို့ ဆိုထားတော့ တခါက ကျနော် တင်ဖူးတာကိုပဲ ပြန်တင်လိုက်မယ်။ ဒီစာမျက်နှာက ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှာ ကွန်သာယာ၊သမိုင်းအုပ်ဆောင်း စာစဉ် အမှတ်(၈) မှာ ဒေါက်တာသန်းထွန်းရေးတဲ့ `မြန်မာ့သမိုင်းရဲ့ သမိုင်း´ ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးရဲ့ စာမျက်နှာ- ၂ ကိုကြည့်ပါ။
ပုံတွေကို သေချာကြည့်ချင်ရင် ကျနော့် U U Mhaw Sayar wall ပေါ်မှာ တင်ထားပါတယ်။ ဒေါင်းလုတ် ပြီး ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Tags: Allah, Asian, Asian-American, Burmese American, China, Ethnicity, Network, Pagan
This entry was posted on March 30, 2013 at 6:58 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.